Tag: raadinta deegaanka | Martech Zone
Tag: raadinta deegaanka
Waxaan la shaqeyneynaa dhowr shirkadood oo aad u waawayn oo ku saabsan kor u qaadista muuqaalkooda raadinta dabiiciga ah hadda waxaana si dhab ah ula yaaban nahay sida ay ugu fiicnaato mashiinka raadinta hore ee ay ku kacayso iyaga, iyaga oo aan helin. Waxay macno ahaan u bixin jireen shirkadaha waxyeellaynaya waxqabadkooda. Hal shirkad ayaa dhistay beero xayeysiis ah ka dibna waxay soo bandhigeen bogag gaagaaban oo leh ereyo kasta oo isku dhafan oo la heli karo, iyo iskudhaf dhammaan bogagga. Natiijadu waxay ahayd jahawareer ka yimid domains, jahwareer sumadeed,
Google Meheraddayda Raadinta Maxalliga ah
Sabtida, Maarso 7, 2015 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Bishii Abriil ee la soo dhaafay, waxaan sameeyay qoraal ku saabsan Google My Business. Toddobaadkan dhammaadkiisa, waxaan ka soo qaaday gabadhayda ballanta timaheeda. Saloonku wuu qurxoonaa, dadka ka shaqeeyaana waxay ahaayeen kuwo cajiib ah. Mulkiilaha ayaa i weydiiyay waxa aan nolol u qabtay waxaanan u sheegay in aan shirkadaha ka caawiyo suuqgeynta internetka. Waxaan taagneyn kombuyuutar wuxuuna ila wadaagay in barta uu ka iibinayo ay sidoo kale sameysay degelkiisa. Aniga
Isniin, Oktoobar 28, 2013 Isniin, Oktoobar 28, 2013 Douglas Karr
Waxaan waqti dheer taageere u ahaa dadka aaladda Cirrus ABS. Waxay hadda sii daayeen, MarketSnare, xalka websaydhka gaarka ah ee kaa caawinaya inaad xoojiso joogitaanka suuqgeynta maxalliga ah! U adeegso qalabkan dijitaalka ah si aad u abuurto, u maamusho oo u sameyso astaantaada iyo suuqgeynta adoo adeegsanaya shabakadaha degellada - dhammaantoodna adigoo isticmaalaya hal isdhexgal. MarketSnare waxay awood u siisaa urur kasta oo leh goobo badan inuu lahaado degello degello shaqsiyeed mid kasta oo ka mid ah degaannadiisa. Xalka ayaa lagu dabaqi karaa oo kaliya